हस्तमैथुन गर्नु ठिक कि गलत ? कतिपटक गर्नु ठिक ? - शैली न्युज
हस्तमैथुन गर्नु ठिक कि गलत ? कतिपटक गर्नु ठिक ?
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १०:३३
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा अहिले पनि हस्तमैथुन गर्नुलाई त्यति ठिक मानिदैन् ।
तर एक अध्ययन्ले भने हस्तमैथुन गर्नुलाई ठिक मात्रै नभनी यौन समस्याको प्राकृतिक उपचार समेत हो भनि चित्रित गरेको छ ।अध्ययनका अनुसार ९४ प्रतिशत पुरुष र ८९ प्रतिशत महिला जीवनमा कुनै न कुनै समयमा जानाजान हस्तमैथुन गरि आनन्द लिने गर्छन् ।
तर कतिपयले सीमाभन्दा बढी हस्तमैथुन गरि सामान्य स्वास्थ्यमा समस्या समेत पारेका छन् । यद्धपी अनुसन्धानले युवा अवस्थामा साताको दुई देखी तीन पटक हस्तमैथुन गर्न हानी नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यसो त हस्तमैथुनका बारेमा मानिसहरुमा विभिन्न किसिमका भ्रमहरु पनि छन् ।
एक खाले मानिसले हस्तमैथुनले शारीरिक कमजोरी आउछ र व्यक्तिको यौन क्षमतामा असर गर्छ समेत भन्दै आएका छन् तर पछिल्लो अनुसन्धानले भन हस्तमैथुन गर्दा हुने फाइदाका बारेमा केही कुरा प्रकाशमा ल्याएको छ के फाइदा हुँदो रहेछ त रु हेरौँ
हस्तमैथुन चाहे पुरुषले गरुन चाहे महिलाले यसले आनन्द मात्रै दिन्छ । मानसिक तनाव निक्कै कम भएर जान्छ ।
मानसिक मात्रै होइन हस्तमैथुनले शरीरका मांशपेशीलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ । छिटो निन्द्रा लाग्छ ।
मस्तिस्कमा तनाव बढाउने नसा हस्तमैथुनको बेलामा फुल्लिन्छ र ठूलो हुन्छ । यसले रगत सञ्चालनमा सहजता थप्छ र उच्चरक्तचापको समस्या कम हुन्छ ।
महिलाहरुले हस्तमैथुन गर्दा महिनाबारिसम्वन्धी विकार पैदा हुँदैन् ।
रक्तसञ्चारप्रकृयालाई सहज बनाउछ जसले प्रेसरको खतरा कम हुन्छ ।
हस्तमैथुन गर्ने पुरुषमा प्रोष्टेट क्यान्सरका खतरा कम हुन्छ ।
निन्द्रा नलाग्ने समस्याको प्राकृतिक उपचार नै हो भन्दा हुन्छ । अर्थात निन्द्रा लागि हाल्छ ।
टाउको तथा शरीर दुख्ने समस्याबाट छुटकारा दिलाउछ ।
हस्तमैथुनले यौनजन्य विमारीबाट बचाउछ साथै अनिच्छुक गर्भ रहँन दिदैन ।
तर हस्तमैथुन साताको दुई देखि तीन पटकसम्म गर्नुराम्रो
१४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै, इण्डाेनेसिया र भियतनामबाट एअर एम्बुलेन्स आउने
जान्नै पर्ने कुरा : महिनावारीमा याैन सम्पर्क गर्दा के हुन्छ ?